မြန်မာ့သားကောင်း: တူရကီက ရခိုင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အကူအညီပေးရန် အသင့်ဟုဆို
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမတွင် ပြုလုပ်သည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် တူရကီ သံအမတ်က
ပြောသွားခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင်က ယာယီကယ်ဆယ်ရေးတဲများ အကူအညီပေးရန်
Mr. HE . Murat Yavuz Ates နှင့်အဖွဲ့သည် နေ့လည်ပိုင်းတွင်း ကျောက်ဖြူမြို့နယ် မင်းဂံရွာသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ရခိုင်ဒုက္ခသည်များအတွက် ဆန်အိတ် ၈၀ နှင့် ဆေးဝါးများ ထောက်ပံ့ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ယင်းအပြင် စစ်တွေမြို့နယ် သက္ကေပြင်ရွာရှိ ဒုက္ခသည်များအတွက်လည်း ဆန်အိတ် ၂၂၂၈ အိတ်နှင့် ဆေးဝါးများ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
တူရကီ သံအမတ်နှင့်အဖွဲ့သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် လေကြောင်းခရီးဖြင့် စစ်တွေမြို့မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာလာပြီ ဖြစ်သည်။
တူရကီ တူရကီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr Ahmet Davutoglu ဦးဆောင်သည့် အစ္စလာမ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (OIC) ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်လည်း သြဂုတ်လ ၁ဝ ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့နယ်ရှိ ဘောဒူဘ (ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်စခန်း)နှင့် မူဆလင်များ နေထိုင်သည့် အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်အပြင် ဆုတောင်းပြည့်ကျောင်းရှိ ရခိုင်မီးဘေးဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့သေးသည်။
ယခုလ ၈ ရက်နေ့ကလည်း အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr.Joe Yun၊ သံအမတ်ကြီး Mr DerekJ Mitchell ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr.Hans ten Feld တို့ ပါဝင်သော အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦးပါ သံတမန်အဖွဲ့သည် မောင်တောမြို့နယ်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများ အခြေအနေကို သွားရောက်လေ့လာ ခဲ့သည်။
မောင်တော မြို့နယ် မောရဝတီကျေးရွာတွင် အခိုင်အမာအိမ် ခြောက်လုံး၊ ရွက်ဖျင်တဲ ၁၂၂ လုံး ဆောက်လုပ်ထားပြီး အလယ်သံကျော် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွင် အိမ်ထောင်စု ၁၂၂ စု၊ လူဦးရေ ၄၆၃ ယောက်၊ ရွှေရင်အေး ကျေးရွာတွင် အခိုင်အမာအိမ် ၃၈ လုံး ယာယီ ရွက်ဖျင်တဲ ၇၉ လုံး ဆောက်လုပ်ထားသည်ဟု နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် အင်္ဂါနေ့ က ဖေါ်ပြထားသည်။
ယင်းအပြင် မောင်တောမြို့ ၄ မိုင်စခန်းနှင့် ပရဟိတ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတို့တွင်လည်း အိမ်ထောင်စု ၇၆ စုနှင့် လူဦးရေ ၂၆၆ ဦးတို့ နေထိုင်လျက်ရှိသည်ဟု သတင်းစာက ဖေါ်ပြထားသည်။
ဇွန်လအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ရခိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ၇၇ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း လူနေအိမ် ၄,၈၂၂ လုံး၊ ဗလီ ၁၇ လုံး၊ ဗုဒ္စဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၁၄ ကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်း သုံးကျောင်း မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့သည်ဟု နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဋ္ဌေးက ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြား ထားသည်။
At 9/12/2012 04:42:00 PM